प्रतिनिधिसभा भंग भएको केहि घन्टामै काठमाडौं उपत्यकामा घट्यो यस्तो घट्ना ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रतिनिधिसभा भंग भएको केहि घन्टामै काठमाडौं उपत्यकामा घट्यो यस्तो घट्ना !
आम नागरिकमा फेरि नेपालमा संकटकाल लाग्ने हो की भन्ने डर छ । अझ देशमा सेना परिचालन हुुने र देश थप अस्थिरता तर्फ धकेलिने भयले सबै अबको निकाश के होला भनेर हेरिरहेका छन् । तर विज्ञहरुको धारणा भने फरक छ ।
एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार अनौपचारिक रुपमा मुलुकका सबै सुरक्षा निकायले आआफ्नै हिसाबले सतर्कता बढाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले मुलुकका थप संकट निम्तनसक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै उत्पन्न हुने सक्ने सम्भावित परिस्थतीलाई ध्यान राखेर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले राजधानीमा सुरक्षा तैनाथी बढाएका छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, बालुवाटारको भाटभाटेनी क्षेत्र, राष्ट्रपति निवास आसापास, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय आसपास र माइतीघर क्षेत्र लगायतका स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितीको बढाइएको छ ।
यस्तै, सेनाले मुख्यालय जंगी अड्डामा प्रमुख सैनिक अधिकृतहरु (पीएसओज) को बैठक पनि बसेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमपछि मुलुकमा पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती र प्रभावहरुको विषयमा मुख्यालयमा छलफल भएको छ ।
यसै क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश भएको भन्दै आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा नेकपासम्बद्ध विभिन्न जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **